Soomaaliya oo xiriirka u jartay dalka Guinea iyo Ujeedada Safarka Biixi ee Dalkaasi oo la ogaaday. – Hornafrik Media Network
Wasiirka arrimaha dibeda Somaliland iyo Wasiirka Maaliyada ayaa si wada-jir ah u sheegay in ujeedada socdaalka Madaxweyne Biixi uu yahay sidii ay Somaliland u xoojin lahayd xiriirka dalalka galbeedka Afrika iyo weliba sidii ay dalkaas uga baran laheyd cashar ku saabsan qaabka uu u casriyeeyay dhaqaalihiisa.
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland, Yaasiin Faratoon ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in labada wadan ay ka wada-hadli doonan arrimaha danaha guud inta ay joogan dalka Guinea.
Wasiir maaliyadda Somaliland, Sacad Cali Shire ayaa isaguna waxa u sheegay in socdaalka Madaxweyne Biixi ee dalka Guinea uu yahay sidii ay Somaliland dalkaas uga soo baran lahayd qaabka ay Guinea u casriyaysay dhaqaalaha, gaar ahaan qaybta macdanta.
Socdaalkan Madaxweyne Biixi ayaa muujinaya sida ay Somaliland u kobcinayso xiriirka ay la leedahay dalalka Afrika, taasi oo ay muddooyinkii la soo dhaafay sare u qaadeysay xiriirkeeda arrimaha dibadda, iyada oo si toos ula fal-galeysay wadamo badan oo ku yaalla qaaradda Africa.